I-China Naples iphumle isitulo kunye ne-footstool Manufacture kunye neFactory |Tailong
I-Naples iphumla isitulo esinesihlalo seenyawo
Yonwabela umzuzu wokukhanya kwelanga ngaphandle ukusuka kwintuthuzelo yesitulo sokuphumla saseNaples.Ibandakanya idizayini ehlengahlengiswayo eyenziwe kwisakhelo sentsimbi esomeleleyo esomeleleyo kunye ne-textilene ekwazi ukumelana nemozulu, kunye neecushion ezisuswayo.Ayinakuba yindawo ebalaseleyo kwidama lokuqubha, kodwa kwikona ethe cwaka yepatio.Ufunda nje incwadi okanye umamele umculo ngokuzolileyo ukuze ube liqabane elifanelekileyo omnye komnye ngeemvakwemini ezinelanga.
Isitulo sokuphumla saseNaples
Naples isitulo seenyawo
YOMELE kwaye IYADLA
Ukusebenzisa intsimbi eyomeleleyo necekethekileyo #304 ukwenza isakhelo kunye nokusebenzisa ilaphu lelaphu elilukiweyo elimelana nemozulu kwindawo engasemva kunye nakwindawo yesitulo.
Isitulo esisongayo sinesiseko sentsimbi exutyiweyo egxunyekwe ngomphezulu wengubo engqinwa yimozulu.Isitulo seenyawo esilula, ulwakhiwo oluqinileyo lulungelelaniswe ngokugqibeleleyo ukuhambelana nokuphakama kwesitulo sokuphumla.
Ngecushion ethambileyo esuswayo eyandisa isitulo sonke sokuphumla.Kukho kwakhona umqamelo wentloko yenkxaso yentloko kunye nentamo.Imiqamelo inokususwa kwimozulu eshushu ukuze iveze ilaphu elinomnatha eliphefumlayo ngaphantsi.
I-backrest yesi situlo sokuphumla sitsala amehlo sisebenzisa uhlengahlengiso lwezandla kwizikhundla ezi-5, ukubonelela ngokuphumla okugqibeleleyo okukuvumela ukuba ukhethe i-angle ekufaneleyo.Ngaphezu koko, isitulo sinokusongwa xa singasetyenziswa.
SISEBENZISE NGOKUPHELELEYO ISITHUBA
Isitulo seenyawo esikhaphukhaphu kwaye esomeleleyo sinokusonga kakuhle ukuze sibekwe kude xa singasetyenziswa.Yisebenzise njengesihlalo esongezelelweyo kwipinki okanye indawo yokuphumla efanelekileyo - nokuba yeyiphi na indlela, inika isitayile esiqhelekileyo kunye nomsebenzi osebenzayo.
Isitulo sokuphumla sentsimbi engenastainless
I-1 PC / CTN 1152 PCS / 40HQ
I-Naples Relax Chair Display
Ngaphambili: Isitulo sokutyela saseAngus rattan
Okulandelayo: Hills textilene isitulo sokutyela (Teak armrest)
I-Ivy D yelaphu lounge
Raja itafile yekofu engqukuva
Itafile yeCamila engqukuva-Dia135 (iglasi yeeCeramics)
Santo intambo isofa enye